तपाईं जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? ऋण लागेको हुनाले बेच्न लागेको मात्र १ लाख ’२०’ हजार कठहा - nepal day
तपाईं जग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? ऋण लागेको हुनाले बेच्न लागेको मात्र १ लाख ’२०’ हजार कठहा
प्रकासन मिति : ५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार १४:५८
दाङ तुल्सिपुर उपमहानगर पालिका वडा न 1 छोटे भन्ने ठाउमा 100020 हजार प्रती कठ्ठाको दरले 1 बिगाहा जग्गा बिक्रीमा छ र धान खेती बाख्रा पालन तरकारी खेती भैंसी पालान
तरकारी खेती भैंसी पालान माछा पालन गर्नको लागि यकदम उपयुक्त नम्बरी जग्गा बिक्री छ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला *****
जाजरकोट, पुस ९। सडकको अस्थायी ट्रयाक खोल्नका लागि आठबीसकोट नगरपालिकाले हेलिकोप्टरमा डोजर ढुवानी गरिरहेको छ ।
अप्ठ्यारो भूगोल भएका कारण हेलिकोप्टरको प्रयोग गरी सडक निर्माणका लागि डोजर हेलिकोप्टरमा ल्याएर सडकको ट्रयाक खोल्न लागिएको नगरप्रमुख गोरखबहादुर केसीले बताए ।
आठबीसकोटभित्र अहिलेसम्म ३०० किलोमिटर ट्रयाक सडक खोल्ने काम भएको उनले बताए । नगरपालिकाको वडा नं ३ मा रहेको डोजरलाई हेलिकोप्टरमा ढुवानी गरी वडा नं १ मा लगेर सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन लागिएको छ । सर्वसाधारणले सडक खनेर सम्भव नभएपछि डोजरको प्रयोग गर्नुपरेको हो ।
वडा नं २ को स्यालामा सडक निर्माण गर्दा झारमारे लेकबाट सामग्री ढुवानी गरिएको थियो । नगरपालिकाको अत्यधिक अप्ठ्यारो भागमध्ये यही पर्दछ । हिमालय क्षेत्र भएकाले यहाँ काम गर्न मुस्किल छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल👇👇👇 क्लिक गर्नुहोला *****